June | 2014 | Home Somali Arguments
Xasan ma hayaa dariiqii lagu gaari lahaa dowladnimo dhab ah!Wednesday 25 June 2014
Xasan Waxaa laga dhaxlay Xabaalo! – Wednesday 25 June 2014 –
Moment Media Ethics – 23 June 2014 — Waxaan aad ugu xumahay in Maamulka Koonfur Galbeed loo aqoonsado G. Bay & Bakool iyo Sh/hoose iyada oo la diidayo midkii 6 Gobol ahaa oo ay Soomaalida ku mideeysneeyd, maxaa kalifay in xiligaan dowlada Federaalka aqoonsato Maamulka Shariif Xassan Sheekh Aadan ku soo dhoodhoobay Hotel Edan?
Xasan Sheekh waxaa leeys-lahaa waa waayo arag ruugcadaa ah oo dalka dhex joogay 1991 ilaa iyo xilka Madaxweeyne uu ka noqdo balse waxaa dad faro badani u arkaan in Xasan Sheekh uusan laheeyn Aqoontii iyo kaartidii lagu hogaamin lahaa Dowlad, waxaa uu qaatay Go’aano xaqiiqdii la dhahi karo dalka waxeey u horseedeen kala fogaansho iyo kalsooni daro umadeed oo la dhihi karo uma cadaalo falin Ummada Soomaaliyeed oo maxaa ka mid ah intaba ??
Cali Maxamed Geedi oo maanta Shabeelaha Dhexe ka bilaabay qorshe
Sawiro maanta: Cali Maxamed Geedi oo maanta Shabeelaha Dhexe ka bilaabay qorshe uu muddo diyaarinaayay (CABSI DAGAAL)
Moment Media Ethics – 17 JUN 2014: Waxaa maanta socdaal uu gobalka Shabeelaha Dhexe uga bilawday siyaasiga caanka ah Cali Maxamed Geedi Marna dalka Ra’iisul wasaare kasoo noqday.
Mr Geedi oo ay la socdaan xilidhibaano iyo siyaasiin kasoo jeeda gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa haatan gaaray degmada Balcad, waxaana uu wadaa qorshe maamul lagu sameenaayo.
Horay shabakada Alldhacdo waxa ay usoo daabacday warar sheegaayay in uu wado diyaarinta maamul gobaleed Labada Shabeele iyo Muqdisho qeyb ka mid ah, waxaana hadda uu bilaabayaa qorshaha arinkaasi.
Waxa uu saacado ka dib usii gudbi doonaan degmada Jowhar ee gobalka Shabeelaha Dhexe, iyadoona marka halkaasi uu gaaro ka hadli doono uljeedka rasmiga ah ee safarkiisa.
Hadii Cali Maxamed Geedi uu qorshaha maamul gobaleedkaan ka dhabeeyo waxay taasi qeyb ka noqoneysaa colaada ay abuureen maamul gobaleedyada, waxayna curyaamin doontaa howlasha shaqo ee DF.
Moment Media a Ethics – Saxaafiyadda Xamdi Maxamed Kadiye ayaa su-aalo culus ku bahdishay aqoonyahanka garashada ka aradan ee Prof.Axmad Ismaciil Samatar kadib markii uu ku hungoobay damaciisa Madaxweynenimada.
Xamdi Kadiye waxay ku tiri “Aqoonta waxay u baahan tahay caqli iyo garasho,taasna kaama muuqato”